Subject: ဟာသတွေပဲပေါ့ဗျာ................... Sat May 08, 2010 2:42 am
ကိုချူချာ ဓါတ်ပုံဆရာကို ပြောသည် ။
" ဟိုမှာ အင်မတန်လှတဲ့ သစ်ပင်ကို တွေ.တယ်မဟုတ်လား ။
အဲ ..ကျနော့်ကို အဲဒီသစ်ပင်နဲ့ အတူတူ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ ရိုက်ပေးစမ်းပါ ။"
"သစ်ပင်ဘေးမှာ ရပ်ပြီး ရိုက်မှာလား ။ ဒါမှမဟုတ် သစ်ပင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုံကို
"နိုး ..နိုး ..ကျနော် သစ်ပင်နောက်မှာ ပုန်းနေမယ် ။ရိုက်သာ ရိုက်လိုက် ။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံ ကို
အမေ့ဆီ ပို.လိုက်မယ် ။ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ပြီး ဟဲ့ ..ငါ့ သားဘယ်မှာပါလိမ့် လို. သူမေးလိမ့်မယ် ။
အဲဒီ အခါမှာ ကျနော် သစ်ပင်နောက်က ထွက်လာပြီး ဂွတ်မော်နင်း မေမေ လို. နှုတ်ဆက်လိုမယ် ။
ဟဲ ..ဟဲ ။"
အမျိုးသမီးတစ်ဦး သူမဧ။် ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းကို ပြောပြနေသည် ။
"အိုင့်ယောက်ျားလေ အင်မတန်ကို စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတဲ့လူ သိလား ။ တစ်ချိန်လုံး
သူ. အမေအကြောင်းကိုပဲ သတိတရ ပြောနေတယ် ။ မေမေ ဆိုရင် ဒီလိုလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး ။
မေမေ မြင်စမ်းချင်တယ် ။ မေမေဆို ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားပဲ ကြားနေရတယ် ။ အမေကို
ရှေ.တန်းတင်လွန်းတယ် ။ အိုင့်ကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး ။အိုင် စိတ်ညစ်လှပြီ ။"
" မိန်းမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ယူ.ကို သူစိတ်ဝင်စားလာအောင် လုပ်ဖို.လိုတယ် ။ အဲဒါဆိုရင်
သူ.အမေကို သူ သတိရတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ညနေ သူရုံးကပြန်လာတဲ့အချိန် သူ.ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့
အ၀တ်အစားဝတ်ပြီး ကြိုကြည့်စမ်းပါ ။"
သူငယ်ချင်း အကြံပေးသည့် အတိုင်း တညနေတွင် အမည်းရောင် ဘရာဇီယာ ၊ အမည်းရောင် ခြေအိတ်နှင့်
အမည်းရောင် ဇာလက်အိတ်တို.ကိုဝတ်ပြီး ယောက်ျားကို ခရာတာတာ အမူအရာဖြင့် ကြိုသည် ။ ယောက်ျားက သူ.ကို
မြင်မြင်ချင်း စိုးရိမ်တကြီး မေးသည် ။
"မင်း တစ်ကိုယ်လုံး အမည်းရောင်နဲ့ ပါလား ။ မေမေ ဘာဖြစ်လို.လဲကွ ဟေ ။"
သားဖြစ်သူက နယ်ရှိ မိခင်ထံ ဖုန်းဆက်သည် ။
"ဟဲလို ... မေမေ လား ။ ကျနော် မိန်းမ ယူဖို.ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဗျ ။ ဒါပေမဲ့ မေမေ ..
ကျနော် ယူမဲ့ မိန်းကလေးက အသားမည်းမည်း နီဂရိုး အမျိုးသမီး ဖြစ်နေတယ် ခင်ဗျ ။"
"ဟုတ်လား ။ ၀မ်းသာလိုက်တာ သားရယ် ။ ဒါများ အရေးတကြီး လုပ်လို.ကွယ် ။
မေမေ နဲ့ သားတို.ဖေဖေ အသားအရောင် ခွဲခြားတတ်တဲ့စိတ် မရှိဘူးဆိုတာ မင်းသိသားနဲ့.."
"ဒါပေမဲ့ ..သူ.မှာ အရင် ယောက်ျားနဲ့ ရတဲ့ ကလေး သုံးယောက်ပါလာမယ် ခင်ဗျ ။"
"ကိစ္စမရှိပါဘူး ။ သား ဖေဖေ က ကလေးတွေ ချစ်တတ်ပါတယ် ကွယ့် ။"
"ခက်တာက ကျနော်တို. နေစရာ မရှိဘူး မေမေ ရ ..။"
"ဒါလည်း ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး။ မမေတို.ဆီ လာနေပေါ့ ။ မေမေတို. အိမ်ခန်းက အိပ်ခန်း
တစ်ခန်းထဲ ရှိပေမဲ့ နေလို.ရပါတယ် ။ မင်းတို.မိသားစု အဲဒီအခန်းမှာ နေကြပါ ။
အဲ .. မင်း ဖေဖေ ကတော့ စတိုခန်းထဲမှာ နေပါလိမ့်မယ် ကွယ် ။"
"မေမေ ၊ မေမေကရော ဘယ်မှာနေမှာလဲ ခင်ဗျ ။"
" မေမေလား ၊ မေမေလေ မင်းနဲ့ ခု စကားပြောပြီးတာနဲ့ ကြိုးဆွဲချပြီး ကိုယ့် ကိုယ် ကို
သတ်သေသေလိုက်တော့မယ် ။ သား စိတ်မပူပါနဲ့ ။"
ပီတာလေးက အမေ ကိုပြောသည် ။
" မေမေ .. ဖေဖေကပြောတယ် ။ လူဆိုတာ မျောက်ကနေဆင်းသက်လာတာတဲ့ ။
ဟုတ်သလား ဟင် ။"
" မသိဘူး သား ။ မင်း အဖေက မေမေ့ ကို သူ.မိဘတွေနဲ့ မိတ်မဆက်ပေးဖူးဘူးလေ ။"
ပီတာလေး ကန်လိုက်သော ဘောလုံး အိမ်နီးချင်း ပြတင်းပေါက်ကို ထိမှန်ပြီး ကွဲသွားသည် ။
အမေဖြစ်သူက ပီတာလေးကို ခြောက်လှန်.သည် ။
" မင်း အဖေ မှန်အသစ် မယူလာမလာမချင်း ပေါက်နေတဲ့ နေရာကို မင်းရဲ့ ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့
ပိတ်ပေးထားရမှာပဲ ၊ နားလည်လား ။"
"ကျနော် ထမင်းစားတဲ့ ချိန်မှာ ကျနော့် အစား မေမေ ကူပိတ်ပေးနော် ။"
"" ဘာလဲ၊ အရင်က တစ်ခါမှ အစမ်းသပ်မခံခဲ့ဖူးဘူးလား "" "" အို- အစမ်းခံဖူးတာပေါ့၊ တကယ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး""
လူချောလေးတယောက်မှာ ချစ်စ ခင်စ ကြင်နာစရည်းစားအသစ် စက်စက်လေးတယောက်ရှိတယ် ။ သူ့ အသည်းလေး မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ..........ဘာလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ အသည်းအသန်စဉ်းစားရပါတော့တယ် ။။သူ့အချစ်လည်းပေါ်လွင်နေမယ် သူမအတွက်လည်းအသုံးဝင်ရမယ် ...........။
အမှတ်တရ ဂန္ဓ၀င်လဲမြောက်ရမယ်ပေါ့ ။ဈေးကြီးတာလဲ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ နောက်ဆုံးအကောင်းစားလက်အိတ်ဖြူဖြူလေးတစ်စုံ
၀ယ်ပေးဖို့ကြည်နူးစွာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ် ဂွတ်တယ်နော်.....။
မိန်းမအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းဆိုင် သွားမှာမို့ ချစ်သူရဲ့ ညီမလေးလဲပါတယ်လေ။ ဆယ်ကျော်သက်လှလှလေးပါပဲ။ ဆိုင်ရောက်တော့ သူက လက်အိတ်ဖြူဖြူလေးတစ်စုံဝယ်တယ် ၊ ချစ်သူညီမလေးက အောက်ခံဘောင်းဘီ( ပင်တီ) တစ်ထည်ဝယ်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ထုတ်ပိုးပေးတဲ့ အရေငြ်းစာရေးမ အမှားကြောင့် ချစ်သူရဲ့ ညီမလေးက လက်အိတ်ရသွားတယ် ။
သူလည်းဖွင့်စစ်ဆေးမနေပဲ (ပင်တီ) ပါဆယ်ထုတ်နဲ့ စာတစ်စောင် ရေးပီးစာတိုက် က ပို့လိုက်တယ်......
ကိုယ်ဘာလို့ ဒီလက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ရသလဲဆိုတော့ မင်းနဲ့ကိုယ်ညနေခင်းတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါ
မင်းဝတ်လေ့ဝတ်ထမရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ်သတိပြုမိလို့ပဲ ။မင်းညီမက ချွှတ်လို့ စွပ်လို့လွယ်အောင် အဲဒါကို ၀ယ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ဟုတ်တယ်
................. သူစွပ်ပြ ချွတ်ပြတယ် လှလိုက်တာလေ ချွတ်ရ စွပ်ရလည်း လွယ်တယ် ။ ကိုယ်က နှိပ်ကြယ်သီးပါတာ ၀ယ်အုန်းမလို့ပါပဲ။
အရောင်းစာရေးမကလဲ သူမလဲ ဒါပဲဝတ်ကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင် ၀တ်ပြချွတ်ပြသေးတယ် အတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ် သူမကအပေ အစွန်းလည်း ရေဆေးရုံနဲ့ ပြောင်ကြောင်း အာမခံတယ်လေ ဒီတခါကိုယ်လာရင် မင်းဝတ်ထားတာမြင်ချင်တရ် ၊တွေ့ရင်တော့လား
အထပ်ထပ်အခါခါ နမ်းပစ်မိမှာပဲ ။ သောကြာနေ့မှာ ကိုယ်နမ်းဖို့ဆက်ဆက် ၀တ်ထားနော် ......နော်
Forward မေးလ်များမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။